Bidix iyo Hexen: Sidee loogu ciyaaraa ciyaaraha "iskuulkii hore" ciyaaraha GNU / Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Bidix iyo Hexen: Sidee Loogu Ciyaaraa Ciyaaraha "Dugsigii Hore" ee GNU / Linux?
Mar labaad, maanta waxaan gali doonnaa «Dunida Gamer» gaar ahaan noocyada ciyaaraha "Iskuulkii Hore" intee in le'eg ayaynu jecel nahay kuweenna markii horaba soo koray, laakiin waxaan ku soo wada kornay iyaga oo la ciyaaraya, iyo qaar ka mid ah dhalinyarada oo jecel Ciyaaraha Retro ». Sidaa darteed, maanta leexashadu waxay gaar ahaan u tahay Ciyaaraha sida Bidco iyo Hexen.
"Cadaab, bidco iyo Hexen" waxay ka mid yihiin liis dheer oo ah ciyaaraha sida "Old School", kuwaas oo noo keena noloshu badan iyo xusuus xiiso leh. Taasna waan sii wadi karnaa oo ku ciyaaraya GNU / Linux iyada oo loo marayo barnaamijyada gudaha ama baakadaha laga heli karo keydadka sida "Cadaab shukulaatada", ama dibedda oo kale ah "Qiyaamaha Maalinta Qiyaamaha".
Cadaab: Sidee loogu ciyaaraa Qiyaamaha iyo ciyaaraha kale ee la midka ah ee FPS iyadoo la isticmaalayo GZDoom?
Kahor intaadan si buuxda u galin mowduuca ah sida loogu ciyaaro GNU / Linux ciyaaraha sida "Cadaab, bidco iyo Hexen" iyada oo loo marayo "Cadaab shukulaatada" y "Qiyaamaha Maalinta Qiyaamaha", isla markiiba waxaan uga tagi doonnaa liis yar oo ah qoraallo hore oo la xiriira in aan kugula talineyno sahaminta, si loo ballaariyo fursadaha ciyaaraha noocan oo kale ah Dhibaatooyinka:
"GZDoom waa mid ka mid ah 3 Dekadood ee hadda jira oo ay leedahay shirkadda ZDoom, taas oo ah qoys ka soo hagaagay Dekeddaha Doom Engine si loogu fuliyo nidaamyada casriga ah ee hawlgalka. Dekedyadani waxay ka shaqeeyaan Windows-ka casriga ah, Linux, iyo OS X-da, iyagoo ku daraya astaamo cusub oo aan laga helin ciyaaro markii hore ay daabacday Id Software. Dukaamadii hore ee 'ZDoom Ports' waa la isticmaali karaa loona qaybin karaa si bilaash ah." Cadaab: Sidee loogu ciyaaraa Qiyaamaha iyo ciyaaraha kale ee la midka ah ee FPS iyadoo la isticmaalayo GZDoom?
EDuke32: Sidee loo rakibaa loona ciyaaraa Duke Nukem 3D oo ku yaal GNU / Linux?
Quake3: Sidee loo rakibaa loona adeegsadaa kulankaan casriga ah ee FPS Game-ka GNU / Linux?
Wolfenstein - Blade of xanuun: Nooca cusub ee 3.0 ayaa loo heli karaa GZDoom
1 Cadaab, bidco iyo hexen oo leh aakhiro injiin iyo Chocolate Doom
1.1 Maxay yihiin Ciyaaraha Qiyaamada, Bidcada iyo Hexen?
1.2 Codsiyada lagu ordayo ciyaaraha nooca dugsiga ee Old
1.2.1 Mashiinka Qiyaamaha
1.2.2 Cadaab shukulaatada
Cadaab, bidco iyo Hexen oo leh aakhiro engine iyo Cadaab Chocolate
Maxay yihiin Ciyaaraha Qiyaamada, Bidcada iyo Hexen?
Kuwa laga yaabo inayna garanayn ama xasuusan waxa lagu yidhi ciyaaro hore, waxaan soo bandhigi doonaa dib-u-eegis yar, si aan nafteena ugu dhigno macnaha guud:
"Cadaabku waa ciyaar fiidiyoow ah oo ay abuurtay barnaamijka Id Id sanadkii 1993. Qiyaasta asalka ahi waxay ku hoos jirtay nidaamka hawlgalka DOS. Ciyaartuna waxay ka kooban tahay isu ekeysiinta badda meel bannaan oo si joogto ah ugu taal saldhig ku yaal Phobos, mid ka mid ah dayaxyada Mars. Ilbidhiqsi gudaheed, irridaha Jahannamo way furan yihiin, oo waxay siidaayaan jinniyo aan tiro lahayn, jinniyo nijaas ah, zombies ah, oo ku dhaca saldhigga saacado gudahood. Dabeecaddu waa qofka keliya ee ka badbaaday aadanaha saldhigga ujeeddadiisuna waa inay ka dhigto mid nool heer ilaa heer (sida Wolfenstein 3D)." Halaag ku saabsan cadaabkii wiki fandom
"Heretic (af-Ingiriisiga bidcadda ah) waa ciyaar guul ah oo khiyaali ah iyo ficil ah, oo la soo diray Diisambar 23, 1994 oo ay soo dirtay Raven Software, taas oo ka dhalatay xiriirkeedii labaad ee ay la yeelatay ID Software ka dib Shadowcaster. Iyada oo ku saleysan mashiinka Doom ee wax laga badalay, Heretic wuxuu hormood ka ahaa soo bandhigida nidaamka agabka alaabta si loogu isticmaalo waqtiga dhabta ah, markii dambena wuxuu noqday meel caan ka ah nooca FPS. Id Software ayaa ciyaarta ku soo daabacday astaanteeda." Bidco ku saabsan cadawga Wiki fandom
"Hexen: Beyond Beenta ah (ama si fudud Hexen) waa ciyaar khiyaali ah oo FPS ah (Qofka ugu horreeya ee toogashada) ciyaar fiidiyoow ah oo ay soo saartay Raven Software, oo ay daabacday id Software-ka isla markaana ay qaybisay Warner. Waxaa la sii daayay Oktoobar 30, 1995. Waxaa lagu doodi karaa qeybta xigta ee bidciga, maadaama ay wadaagaan hal koonyo iyo waxyaabo sheekada kamid ah, in kastoo ay ka dhaceyso adduunyo kale." Hexen on the Cadaab Wiki fandom
Codsiyada lagu ordayo ciyaaraha nooca dugsiga ee Old
Si loo fuliyo ciyaaraha sida "Old School" ku saabsan GNU / Linux waxaan haynaa dhowr ikhtiyaar, qaar horeyba loo yiqiin GZDoom, iyo kuwa kale oo aan wali sahamin sida PrBoom. Inta markan aan sahamin doono 2 kale, oo ah:
Sidaad sheegtay degel rasmi ah, "Qiyaamaha Maalinta Qiyaamaha" waxaa si kooban loogu tilmaamay:
"Dekedda Doom, bidcinimo iyo Hexen oo leh sawiro casri ah."
Adiga soo dejiso, rakibid iyo isticmaal waxaan kaliya u leeyihiin in ay soo bixi aad Faylka rakibiyaha qaabka .deb ka Qaybta kala soo bax GNU / Linux. Kadib ku rakib si fudud adoo adeegsanaya CLI ama GUI interface, adoo adeegsanaya habab iyo barnaamijyo caan ah. Si markaa loo socodsiiyo, doorbidayo liiska codsiyada. Markii la fuliyo oo aan bilowno, waxaan kaliya ku qasbanaan doonnaa inaan tilmaano halka aan martigalinay .wad ama .pk3 faylasha cayaarahayaga ku saleysan Cadaab, bidco iyo Hexen, hore loo soo dejiyey ama loo helay si uun.
para macluumaad dheeraad ah ku saabsan "Qiyaamaha Maalinta Qiyaamaha" waad booqan kartaa bogga rasmiga ah ee GitHub.
Sidaad sheegtay degel rasmi ah, "Cadaab shukulaatada" waxaa si kooban loogu tilmaamay:
"Dekad Qiyaame oo si daacadnimo ah u soo saarta khibrada Qiyaamaha, sidii loogu ciyaaray 90-kii. "
Adiga soo dejiso, rakibid iyo isticmaal waxaad kala soo bixi kartaa adiga faylka isha ee qaabka .tar.gz ka Qaybta soo dejiso. Si kastaba ha noqotee, kiiskeena waxaan ku rakibnay iyada oo loo marayo terminal (console), sida kugula taliyay adiga Qaybta rakibida GNU / Linux.
Tan iyo markii, noo caadiga ah Dib u soo celi Linux loo yaqaan Mucjisooyinka GNU / Linux, taas oo ku saleysan MX Linux 19 (Debian 10), taasna waxaa la dhisay iyadoo la raacayo kuweenna «Hagaha Snapshot MX Linux» waxay ku dartay keydadkeeda.
Marka la rakibo, waa in lagu socodsiiyo kaliya barta tilmaamaysa halka aan martigelinay .wad faylasha cayaarahayaga ku saleysan Cadaab, bidco iyo Hexen, hore loo soo dejiyey ama loo helay si uun.
para macluumaad dheeraad ah ku saabsan "Cadaab shukulaatada" waad booqan kartaa bogga rasmiga ah ee GitHub.
Marka la soo koobo, waxaan xaqiijin karnaa illaa maanta in, weli qaar badan oo ka mid ah nostalgic iyo madadaalo «Old School» noocyada ciyaaraha, sida "Cadaab, bidco iyo Hexen", iyo kuwo kale oo badan, ayaa diyaar ah oo lagu ciyaari karaa oo keliya Windows, laakiin sidoo kale hadda Nidaamyada hawlgalka oo bilaash ah oo furan, sida GNU / Linux. Kaliya kuma koobna barnaamijyada gudaha ama baakadaha laga heli karo keydadka sida "Cadaab shukulaatada", laakiin sida bannaanka u ah "Qiyaamaha Maalinta Qiyaamaha".
Ugu dambeyntiina, waxaan rajeyneynaa in daabacaddan ay waxtar weyn u yeelan doonto dhammaanteed «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo gacan weyn ka geysatey hagaajinta, koritaanka iyo baahinta nidaamka deegaanka ee codsiyada la heli karo «GNU/Linux». Ha joojin inaad dadka kale la wadaagto, websaydhka aad jeceshahay, kanaalka, kooxaha ama bulshooyinka shabakadaha bulshada ama nidaamyada farriimaha. Ugu dambeyntiina, booqo boggayaga bogga at «Laga soo bilaabo Linux» si aad u sahamiso warar dheeraad ah, uguna biirto kanaalkayaga rasmiga ah ee Telegram ka FromLinux.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Bidix iyo Hexen: Sidee Loogu Ciyaaraa Ciyaaraha "Dugsigii Hore" ee GNU / Linux?
Apprepo: Bakhaar kale oo websaydh ah oo laga soo dejisto barnaamijyada qaabka AppImage
Musique: Cusbooneysiiyay iyo muusigga muusikada loogu talagalay GNU / Linux